अर्थ Archives - Page3of 23 - दैनिक
दुई करोडको फूल व्यापार
अर्थ बिहिबार ०४ कार्तिक, २०७३
पोखरा। पोखरामा तिहारमा दुई करोड रुपैयाभन्दा बढी मूल्यको फूल व्यापार हुने अनुमान गरिएको छ । पोखरामा स्थानीय उत्पादनदेखि स्याङ्जा, तनहुँ, लम्जुङ पर्वत, बागलुङ्, चितवन, धादिङ, काभ्रे र भारतबाट फूल भित्रिने गरेको छ । फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपाल कास्कीका अध्यक्ष दयाकुमार द्वाले पोखरामा खपत हुने फूलमध्ये ७५ प्रतिशत स्वदेशी फूल र २५ प्रतिशत भारतीय मेरी गोल्ड रहेको […]
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फैलिदै ‘शेर्पा एडभेन्चर गिएर
अर्थ बुधबार ०३ कार्तिक, २०७३
काठमाडौ । अमेरिकास्थित विख्यात म्यासाचुसेट्स इन्ष्टिच्यूट अफ टेक्नलजी (एमआइटी) ले हालै आयोजना गरेको ‘ग्लोबल आन्ट्रेप्रेनरसिप क्याम्प’ मा विश्वभरिबाट सहभागीले ‘मेड इन नेपाल’ लेखिएको शेर्पा एडभेन्चर गियर ज्याकेट लगाएका थिए । क्याम्पका सहभागीका लागि एमआइटीले शेर्पा गियरसँग हल्का निलो रंगका २ सय ज्याकेट अर्डर गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डको रुपमा फैलिरहेको शेर्पा गियरको उत्पादन यसअघि विश्व बैंक, […]
भिबोर सोसाइटी र बुम रेमिटेन्सबीच सम्झौता
अर्थ मङ्गलबार ०२ कार्तिक, २०७३
काठमाडौ। भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र बुम रेमिटेन्स प्रालिबीच रेमिट्यान्स सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकले बुम रेमिटमार्फत् विदेशबाट नेपालीले पठाएको विप्रेषण रकम बैंकका ४२ वटा शाखा तथा १ एक्सटेन्सन काउण्टरमार्फल भुक्तानी गर्नेछ । साथै बुम रेमिट सफ्टवेयरमार्फत आन्तरिक विप्रेषण कार्य गर्नका लागिसमेत सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतापत्रमा भिबोर […]
एक कित्ताको एक हजार २० रुपैयाँ
अर्थ मङ्गलबार ३२ साउन, २०७३
काठमाडौं । युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले लगानीकर्तालाई एक सेयरको एक हजार २० रुपैयाँ लाभांश दिने भएको छ । यसआधारमा युनिलिभरको एक सय कित्ता सेयर हुनेले एक लाख दुई हजाररुपैयाँ नगद लाभांश हात पार्नेछन् । हाम्रो पुँजी बजारमा यो सबैभन्दा आकर्षक लाभांश हो । युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको साउन २८ मा बसेको सञ्चालक समिति बैठकले गएको आर्थिक वर्षको […]
बगरमा व्यावसायिक तरकारी खेती
अर्थ सोमबार ३१ साउन, २०७३
बुटवल । दुई वर्षअघिसम्म हनुमान गढियाको बगरमा झार समेत उम्रिएको थिएन । बगर उराठ लाग्दो थियो । हनुमानगढियाको त्यही बगरमा अहिले लहलह तरकारी फलेको छ । खाली रहेको बगरमा महिलाले तरकारी खेती गर्न थालेपछि रुपन्देहीको बगाह गाविस हनुमानगढियाको बगर तरकारी बारीमा परिणत भएको हो । घरको चुलोचौकोमा सिमित यहाँका महिलाले अघिल्लो वर्षदेखि तरकारी खेती गर्न […]
यसरी गर्न सकिन्छ काक्रा खेती
अर्थ शनिबार २९ साउन, २०७३
काठमाडौं । तपाई पत्याउनुहुन्छ ? कुनै कृषि उपजको उत्पादन माटो बिना पनि हुन्छ भनेर। तर काभ्रेपलाञ्चोकमा एकजना कृषकले जिल्लामै पहिलो पटक माटो बिना नै काँक्रो उत्पादन गरेका छन्। जिल्लाको उग्रचण्डीनाला गाविस– १ मा नेपाल इन्ट्रिग्रेटेड मोडेल एग्रो फार्म प्रालिले उत्पादन गरेको काँक्रो झट्ट हेर्दा घिरौँला जस्तो देखिए पनि स्वादमासमेत फरक पाउन सकिन्छ। माटोमा फलाएको जस्तो […]
मौज्दात रकम अनुसार व्याजदर प्रदान गरिने
अर्थ शुक्रबार २८ साउन, २०७३
नेपाल बंङ्गलादेश बैंक लि.ले नयाँ तथा आफ्ना सम्पूर्ण ग्राहकबर्गका लागि नयाँ बचत खाता “एन.बी. गौरब बचत खाता” मिति २०७३ श्रावन २३ गते देखि ल्याएकोे जानकारी गराएको छ । यस योजना अन्तर्गत मौज्दात रकम अनुसार व्याजदर प्रदान गरिन्छ । न्यूनतम रु.एक लाख मौज्दात राख्नुपर्ने छ । तिनवटा श्रेणीगत मौज्दात अन्तर्गत जति धेरै मौज्दात रकम त्यती धेरै […]
तरकारी खेतीले फेरियो गाउँ
अर्थ मङ्गलबार २५ साउन, २०७३
सिरहा। नब्बे घरधुरीको गाउँमा २० सालसम्म बेसाहा गरेर खानुपथ्र्यो । जंगलबाट काठ दाउरा ल्याएर बेची गुजार चलाउनेको संख्या अधिक थियो । बलौटे जग्गा, त्यसमाथि सिँचाइ थिएन । जेठ लागेपछि गाउँमा अनिकाल हुन्थ्यो । पाँच बिघा खेत जोत्नेलाई पनि आफ्नो उत्पादनले वर्ष दिन खान पुग्दैनथ्यो । तर अहिले दिन फेरिएको छ । अहिले पाँच कठ्ठा जग्गा हुनेलाई […]
अस्थिर राजनीतिले सेयर बजालाई छोएन
अर्थ शुक्रबार ०७ साउन, २०७३
काठमाडौं । अविश्वासको प्रस्तावलाई लिएर सत्तारुढ दल र विपक्षीबीच उत्पन्न तनाव र संभावित मुडभेडको अवस्थाका बीच पनि सेयर बजार बिहीबार हरियो भएको छ । नेप्से परिसूचक बिहीबार ११.९९ बढेर १७९८.८३ विन्दुमा पुगेको छ । कारोबार पनि करिब डेढ अर्बको हाराहारीमा भएको छ । राजनीतिक अन्योलले केही चिन्तित देखिएको लगानीकर्ताहरु ब्रोकर कमिशन ४० प्रतिशतसम्म घटाउने निर्णयले […]
१४ वर्षपछि ऋण मुक्त
अर्थ मङ्गलबार २८ असार, २०७३
काठमाडौं: नेपाल आयल निगम १४ वर्षपछि ऋण मुक्त भएको छ। आइतबार निगमले सरकारलाई साँवा र ब्याज गरी एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेर ऋणमुक्त भएको हो। निगमका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद घिमिरेले आइतबार अर्थ मन्त्रालयलाई साँवा ८० करोड र ब्याज ६१ करोड भुक्तानी गरेको जानकारी दिए। अब निगम डिपो सुधार र भण्डार विस्तारमा लाग्ने उनले बताए। […]